आइतबार सुनको मूल्य बढ्यो, तोलाको कति पुग्यो ? - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com आइतबार सुनको मूल्य बढ्यो, तोलाको कति पुग्यो ? - खबर प्रवाह
काठमाडौँ । हप्ताको पहिलो दिन आइतबार सुनको भाउ तोलामा पाँच सय रुपैयाँले बढेको छ । सुनको भाउ आइतबार तोलाको ७६ हजार पाँच सय रुपैयाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।
यसअघि गएको पुस २३ गते सुनको भाउ अहिलेसम्मकै महँगो तोलाको ७६ हजार पाँच सय रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसपछि घटेर ७४ हजार रुपैयाँसम्म झरेको सुनको भाउ फेरि बढेर आइतबार तोलाको ७६ हजार पाँच सय रुपैयाँ पुगेको हो ।
यस्तै चाँदी आइतबार तोलामा पाँच रुपैयाँ बढेर तोलाको आठ सय ९५ रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको छ ।
चित्रसारीको एक होटल प्रहरीको छापा, अनैतिक कार्यमा संलग्न ८ जना समातिए
भरतपुर । जिउँदो ब्रोइलर कुखुरा र यसको मासुको मूल्य निरन्तर उकालो लागेको छ । एक महिनाको अवधिमा एक सय देखि १३० रूपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ । त्यतिमात्रै होइन, अण्डा र चल्लाको मूल्य पनि निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । ह्याचरी उद्योगीले अघिल्लो महिना १० दिन चल्ला उत्पादन रोकेका थिए । यसरी अण्डा, चल्ला, मासु र जिउँदो […]